အရိမေတ္တယျဘုရား အကြောင်း | မျိုးမြန်မာ
Posted by myomyanmar on May 31, 2014
Posted in: ဗုဒ္ဓဘာသာ, ဘာသာရေး, အတုမရှိမြတ်ဗုဒ္ဓ.	Tagged: အရိမေတ္တယျဘုရား.	Leaveacomment
ဖြေ။ ။ အင်း လူကမအားပေမဲ့ သိချင်လို့ အားကိုးတကြီးမေးလာကြတော့လည်း မိမိသင့်ထားလေ့လာ ထားသမျှဟာ အများအတွက်ပဲလို့ စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတွက် ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက်ဆိုရင်တော့ ရိပ်သာမှာဖြစ်စေ၊ တောရွာမှာဖြစ်စေ အေးအေးဆေးဆေး တရားလေးလုပ်ပြီး နေလို့ရတယ်လို့ ခဏခဏ တွေးဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း မြတ်ဗုဒ္ဓတောင် ကိုယ့်အတွက်ထက် အများအတွက်ကို ဦးစားပေးခဲ့တာဆိုတော့ ကိုယ်ကလည်း ဘုရားလမ်းစဉ်ကို အကုန်မလိုက်နိုင်တောင် ဒီဘ၀မှာတော့ အများကောင်းကျိုးလုပ်ရင်း ကိုယ့်ကျိုးပါပြီးအောင် လုပ်မယ်ဆိုပြီး သာသနာဘောင်မှာနေကာ ပညာတွေကို ဆက်လက်သင်ယူနေရတာပေါ့လေ။
ဒကာ မေးထားတဲ့မေးခွန်းကို ဦးဇင်းသိသလောက် လေ့လာထားသမျှကို ဖြေပေးရမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာဦး အသင်္ချေယျသက်တမ်းမှ ဆယ်နှစ်တမ်းအထိ ဆုတ်ကပ် ဆယ်နှစ်တမ်းကနေ အသင်္ချေယျတမ်းအထိကို တက်ကပ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဆုပ်ကပ်တက်ကပ်တစ်စုံကို အန္တရကပ်တစ်ကပ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ခုမှာ အန္တရကပ်ပေါင်း(၆၄)ကပ် သက်တမ်းရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာတည်စမှ သတ္တမအန္တရကပ်(၇-ကြိမ်မြောက် ကပ်)အထိ ဘုရားတစ်ဆူမျှ မပွင့်သေးဘဲ အဋ္ဌမမြောက် အန္တရကပ်(၈-ကြိမ်မြောက်ကပ်)ကျမှ ပထမဆုံး ကကုသန်မြတ်စွာဘုရား ပွင့်တော်မူပါတယ်။
ထို့နောက် န၀မမြောက်ကပ်တွင် ကောဏာဂုံ မြတ်စွာဘုရား၊ ဒသမမြောက်ကပ်တွင် ကဿပဘုရား၊ ဧကာဒသမ (၁၁-ကြိမ်မြောက်ကပ်)တွင် ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား ပွင့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ ဒွါဒသမ(၁၂-ကြိမ်မြောက်ကပ်)တွင် အရိမေတ္တေယျမြတ်စွာဘုရား ပွင့်တော်မူမှာပါ။
ယခု ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား ပွင့်တော်မူရာ နှစ်(၁၀၀)တမ်းမှ (၁၀)နှစ်တမ်းအထိ ကျဆင်းသွားကာ တဖန် (၁၀)နှစ်တမ်းမှ အသင်္ချေယျတမ်းအထိ တက်သွားဦးမယ်။ ထိုအသင်္ချေယျ တမ်းမှ (၁၂)ကပ်မြောက် ဆုတ်ကပ်ကနေပြန်ပြီး တဖြည်းဖြည်းသက်တမ်းကျဆင်းလာရာ လူသားတို့သက်တမ်း ရှစ်သောင်းသက်တမ်းမှာ အရိမေတ္တေယျ မြတ်စွာဘုရား ပွင့်ပါလိမ့်မယ်။
အရိမေတ္တေယျမြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်ပြီး ကုဋေခုနစ်ရာသော ပရိသတ်တို့ကို ချေချွတ်ပြီးလို့ အနှစ်ရှစ်သောင်းပြည့်တဲ့အချိန် ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်မှာပါ။ ဤဘဒ္ဒကမ္ဘာကြီးဟာ အရိမေတ္တေယျဘုရားရှင်နောက် ဘုရားတစ်ဆူမှ မပွင့်တော့ဘဲ (၆၄)ကပ်ပြည့်တဲ့အခါ ကမ္ဘာပျက်လိမ့်မယ်။ ဘုရားမပွင့်တဲ့ ကမ္ဘာပေါင်းတစ်သိန်းကျော်လွန်တဲ့အခါ မဏ္ဍကမ္ဘာဖြစ်ပြီးတော့ ဥတ္တရာမမင်းဟာ ရာမသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားဖြစ်မယ်။ ပသေနဒီကောသလမင်းက ဓမ္မရာဇာဘုရားဖြစ်မယ်။ အဲဒီမဏ္ဍကမ္ဘာမှာ ဘုရားနှစ်ဆူပွင့်ပြီး ပျက်စီးသွားတဲ့အခါ သာရကမ္ဘာဖြစ်ပေါ်လာပြီး အဘိဘူဘုရားတစ်ဆူသာပွင့်မယ်။ သာရကမ္ဘာပျက်ပြီး ကမ္ဘာတစ်သိန်း ဘုရားမပွင့်ဘဲနေပြီးတော့ ကမ္ဘာတစ်သိန်းကျော်လွန်တဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ ကမ္ဘာများမှာ ဒီဃသောနိအသူရိန်နတ်သား၊ စန္ဒနီပုဏ္ဏား၊ သုဘလုလင်၊ တောဒေယျပုဏ္ဏား၊ နာဠာဂီရိဆင်မင်း၊ ပလလေယဆင်တို့ အစဉ်အတိုင်း ဘုရားဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။
ခုလက်ရှိတည်နေရှိတဲ့ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ သက်တမ်းက(၁၀၀)ကနေ ယခု(၇၅)နှစ် သက်တမ်းအောက် ရောက်နေပါပြီ။ ဒါကြောင့် ယခုမျက်မှောက်ခေတ်မှာ မွေးတဲ့လူတွေဟာ သက်တမ်း(၇၅)နှစ်ထက် ပိုပြီး မနေရတော့ပါဘူး။ ကြာလေ လျှော့လေဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိကိုယ်ကို သတိလေးနဲ့ သေခြင်းတရားကိုလည်း သတိထားကြပါ။
ရေးရတာ ပြောရတာ လွယ်သလို နီးသလိုရှိသော်လည်း အရိမေတ္တေယျဘုရားရှင်ပွင့်ဖို့ရန်အတွက် နှစ်ပေါင်း အသင်္ချေအနန္တ ကြာဦးမည်မို့ တွေ့ဆုံကြုံဖို့ မလွယ်ကူတာကို သဘောပေါက်ထားဖို့တော့ လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်ပွင့်မဲ့ဘုရားကျမှ တရားထူးသိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ မသေချာတာမို့ မျက်မှောက်ကြုံကြိုက်နေတဲ့ သာသနာမှာ အနည်းဆုံးတရားထူးလေးသိမြင်ကာ ဒီဘ၀မဟုတ်တောင် နောက် ဘ၀မှာ နတ်ပြည်၊ ဗြဟ္မာပြည်ကနေ ရဟန္တာဖြစ်ပြီး မြတ်နိဗ္ဗာန်ကို ခိုလှုံနိုင်အောင် လုပ်ကြဖို့ မမေ့ကြပါနဲ့လို့ တိုက်တွန်းရင်း နိဂုံးချုပ်ပါရစေ။
← Global Jihad =တကမ္ဘာလုံး အစ္စလာမ်ဖြစ်ရေး နည်းလမ်းပေါင်းစုံ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကိုကြောက်စရာလည်းမလို.. ကမ္ဘာပျက်မှ မြန်မာပျက်စေရမယ် →